Iindaba - Yeyiphi indlela yokusasaza ubushushu yokukhanya kwesityalo se-LED?
Njengazo zonke iimveliso zombane, izibane zezityalo ze-LED ziya kuvelisa ubushushu ngexesha lokusetyenziswa, nto leyo eya kuthi inyuse ubushushu bemozulu kunye neqondo labo lobushushu. Ukuba ingxaki yokusasaza ubushushu ayithathelwa ngqalelo, ayizukuchaphazela kuphela ubomi bezibane zezityalo ze-LED, kodwa inokutshisa nezibane. Ikwachaphazela ukukhula okuqhelekileyo kwezityalo ezinemitha.
Iimpawu zezibane zezibane ze-LED: zizityebi kwiindidi ze-wavelength, ngokuhambelana noluhlu olubanzi lwe-photosynthesis yezityalo kunye ne-morphology elula; ububanzi besiqingatha samaza obubanzi bebala elimxinwa bumxinwa, kwaye ukukhanya okumsoco okungacocwanga kunye nokudityaniswa komboniso kungadityaniswa njengoko kufuneka. Abavelisi bokukhanya kwezibane ze-LED abazisebenzisi izichumisi konke ukutyala okuphilayo, kodwa izichumiso ezinokusetyenziswa: isichumisi sendlu yasefama, izichumisi zezimbiwa, izichumiso zebhaktiriya zebhayoloji, njl. Ngenxa yesithintelo solu hlobo lokuchumisa, umjikelo wokukhula kwezityalo uza kuchaphazeleka, kwaye ibango elikhulu langoku kwimarike libonakala linqongophele. Ke ngoko, ukunciphisa umjikelo wemveliso yenye yeendlela.
Isibane sesityalo se-LED sineengcambu ezomeleleyo, sikhuthaza ukukhula, silungisa ixesha leentyatyambo kunye nombala weentyatyambo, sikhuthaza ukuvuthwa kweziqhamo kunye nombala, kwaye sonyusa incasa kunye nomgangatho wesiqhamo! Ke ngoko, ukusasaza ubushushu likhonkco elibaluleke kakhulu kwinkqubo yokuvelisa kwezibane zezibane ze-LED. Okwangoku, amanyathelo aphambili okusasaza ubushushu amkelwe zizibane zokukhula kwezityalo ze-LED zezi zilandelayo.
1. Ukukhanya kokutshala kobushushu bokutshala kobushushu: Umgaqo wokusebenzisa ifeni ukukhuphela ubushushu obuveliswe kukukhanya kwesityalo se-LED emoyeni kulula kakhulu. Kuyafana nomgaqo wokusetyenziswa kweekhompyuter kunye neeTV. Ifeni isetyenziselwa ukuvelisa ukuhambisa emoyeni ukuqinisekisa ubushushu. Ubushushu bomoya ojikeleze eyasekuqaleni abuphezulu kakhulu. Ukubeka nje, umoya oshushu oveliswe sisibane sokukhula kwesityalo se-LED kwaye sidluliselwe emoyeni sitsalelwa ngumlandeli, kwaye ke ubushushu obuqhelekileyo bomoya bongezwa kwakhona ukufezekisa ukusasazeka kobushushu.
2. Ukutshiswa kobushushu bendalo: Ukutshiswa kobushushu bendalo kuthetha ukuba awudingi manyathelo angaphandle, kwaye usebenze ngokuthe ngqo ekukhanyeni kwesityalo se-LED. Umgaqo ophambili kukwenza indawo yokudibana kwesibane sonke kunye nomoya wokukhula kwesityalo se-LED sibe sikhulu, kwaye sisebenzise izinto ezinokuqhuba okungcono kwe-thermal. Kulungile ukugqithisela ubushushu obuveliswe sisibane emoyeni, emva koko ngokudibana kwendalo, oko kukuthi, umoya oshushu uyenyuka kwaye umoya obandayo uyazalisa, ukuze kufezekiswe injongo yokuchithwa kobushushu kwesibane se-LED. Okwangoku, amaphiko okusasaza ubushushu, izindlu zezibane, iibhodi zesekethe yenkqubo, njl. Oku kukwaxabiso oluphantsi kwaye olusebenzayo ukusasaza ubushushu, esetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo ezahlukeneyo zombane.
3.Ukusasazeka kobushushu kwe-Electromagnetic: Igama elipheleleyo lokusasazeka kobushushu kwe-electromagnetic kukucocwa kobushushu ngejethi. Endaweni yokusebenzisa ifeni ukwenza ukuhambisa, umngxunya wefilimu oshukunyiswayo ushukunyiswa kukushukuma kombane, ukuze umoya uqhubeke ujikeleze ukufezekisa ukusasazeka kobushushu. Ubunzima bobuchwephesha bunzima kakhulu. Ezinye iimveliso ze-LED zisetyenzisiwe. Ubushushu bunokutshintsha ubume bomzimba kunye nolwakhiwo lweekhemikhali lwento. Ezinye ziya kutshintsha zibe ngcono, njengokupheka nokupheka, kwaye ezinye ziya konakala, njengokutsha nokutsha.